The Centre for Development and Ethnic Studies (CDES) is an independent think tank and study centre founded in 2012 to generate ideas on democracy, human rights and federalism as an effective vehicle for “Peace and...
CDES publication aims to promote and advance research based, credible and effective ideas, principles and practices of democracy, federalism and equality of human rights, as well as initiating programs to develop democratic and political institutions.
As human beings, we have to do the right thing and we have to try to contribute something to our humanity, serve other people as much as we can.
(၁၉) ကွိမျမွောကျ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှု ပူးတှဲကျောမတီ (UPDJC) အစညျးအဝေး
(၁၉) ကွိမျမွောကျ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှု ပူးတှဲကျောမတီ (UPDJC) အစညျးအဝေး၂၀၂၀ ခုနှဈ သွဂုတျလ (၁၇) ရကျMICC-1 ၊ နပွေညျတျော လေးစားအပျပါသော နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ UPDJC ဥက်ကဋ်ဌ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နှငျ့တကှ UPDJC ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌမြား၊ အတှငျးရေးမှူးအဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျအပေါငျးတို့ခငျဗြား- အခုလို (၁၉) ကွိမျမွောကျ UPDJC အစညျးအဝေးမှာ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအစုအဖှဲ့ကိုယျစား အဖှငျ့အမှာစကား ပွောကွားခှငျ့ ရရှိတဲ့အတှကျ မြားစှာဂုဏျယူမိပါတယျ။ ကနြျောတို့ဟာ Coronavirus pandemic ဆိုတဲ့ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ ဆိုကျရောကျမှုကွီးကာလမှာ တှဆေုံ့ပွီး ဒီအစညျးအဝေးကို ကငျြးပတာ ဖွဈတယျ။ ကမ်ဘာကွီးမှာ ဘယျလိုကပျဆိုကျမှုကွီးဘဲ ကွုံနပေါစေ၊ ကနြျောတို့တိုငျးပွညျရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးက သိပျပွီးအရေးကွီးတယျဆိုတဲ့ ခံယူခကျြနဲ့ ဒီအစညျးအဝေးကို ကငျြးပတာဖွဈတယျ။
About The Report This report is based on findings over two years survey, activities and experiences of Centre...
ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်နှင့် NCA လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အ ဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ သည် မတ်လ ၉ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မည်ဖြစ်ကြောင်း...
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချု ပ် ( NCA ) မှာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ ကျန်ရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ စစ်ရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားတွေကိုရပ်ဆိုင်းပေးမယ်လို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် မပျက်စေရန် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ များ မရပ်ဆိုင်းရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုး ပမ်းပေးရန် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဆလိုင်း လျန်မှုန်းဆာခေါင်းက အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်...